ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန်ကျေအောင် - FunnyPC
by H - November 24, 2019
တခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှာ … လင်မယား နှစ်ယောက်ရှိပါတယ် ... အမျိုးသားဟာ သိပ်ကိုကြမ်းတမ်းတဲ့ စရိုက်ရှိတဲ့ အတွက်တစ်နေ့ တစ်နေ့ သူ့အမျိုးသမီးကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး ရိုက်နှက်တတ်ပါတယ် ။
သူအလုပ်က ပြန်လာပြီဆိုတာနဲ့ မျက်နှာက တည်တင်းလို့ အမျိုးသမီးကို ဘယ်လို အပြစ်ရှာရမလဲ ဆိုတာပဲတွေးနေတတ်ပါတယ် … အပြစ်ကလေး တစ်စုံတစ်ရာ တွေ့တာနဲ့ နီးရာ တုတ်ဆွဲပြီး ရိုက်နှက်တော့တာပါပဲ…။
အမျိုးသမီးကလည်း သူ့ကို သိပ်ကြောက်ရ ပါတယ် … သူအိမ်ပြန်လာတာနဲ့ အပြစ်ရယ်လို့ ရှာမတွေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် တစ်အိမ်လုံး ရေအိုးတွေကို ပြည့်အောင် ခပ်၊ တစ်ခြံလုံး အမှိုက်တွေရှင်း၊ ထမင်း ဟင်းတွေကိုလည်း အဆင်သင့် ခူးခပ်ပေးထားပါတယ် …
သို့ပေမယ့် အပြစ်ကတော့ မလွတ်ပါဘူး … ထမင်းကို သူပြန်မလာခင် စောစောလေး ကြိုခူးထားမိရင်လည်း “ ဒီလောက် အကြာကြီးက ထမင်းခူးထားတော့ ထမင်းတွေက အေးကုန်တာပေါ့ ၊ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းနေတာ ဒီ ထမင်းအေးကြီး ငါက စားရမလား၊ ဒီလောက်တောင် နားမလည်တဲ့မိန်းမ ” ဆိုပြီး ထမင်း ပန်းကန်ကို မှောက်ပြစ်ပြီး တွေ့ကရာနဲ့ အမျိုးသမီးကို ရိုက်နှက်တော့တာပါပဲ…။
သူပြန်လာခါနီးမှ အပြေးအလွှား ထမင်းခူးထားပြန်တော့လည်း “ ယောက်ကျားက မောမောပန်းပန်းနဲ့ ပြန်လာတာ ဒီထမင်းပူကြီးစားပြီး ငါ့ကို သေစေချင်လို့လား ” ဆိုပြီး ရိုက်ပြန်တာပါပဲ ...
အမျိုးသမီးခမျာမှာလည်း ထိုအမျိုးသားက ဘယ်လောက်ပဲ ရိုက်ရိုက် သံယောဇဉ်ကလည်း မကုန်နိုင်၊ စိတ်ကလည်း မပြတ်နိုင်၊ နေ့စဉ် ရိုက်နှက်နှိပ်စက်နေတဲ့ ဒါဏ်ကိုလည်း ခံရတာ သိပ်ကြောက်လှတာမို့ ဆုတ်လည်း ဆူး၊ စားလည်း ရူးဘဝနဲ့ နေ့စဉ် အမျိုးသား ပြန်လာခါနီးပြီဆိုရင် တုန်နေအောင် ကြောက်နေရ ရှာတော့တာပါပဲ…
ပတ်ဝန်းကျင်ကတောင် မခံမရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်ကြရပါတယ် “ ဒီလောက် နှိပ်စက်နေတဲ့ ယောက်ျားကို နင်ထားခဲ့ပါတော့လား ” ဆိုလည်း မထားခဲ့နိုင်ပါဘူး ... သူမ မပြတ်နိုင်ပါဘူး … ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး ကြံရာမရတော့တဲ့အခါ … ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းက ဆရာတော်ကြီးထံ အကျိုး အကြောင်း သွားပြီး လျှောက်ရရှာပါတယ်…။ * နောက်ဆုံးတော့လည်း အားကိုးရာက သံဃာရတနာ ပါပဲ…*
အကြောင်းစုံကို သိရတဲ့ အခါ ဆရာတော်ကြီးက မေးပါတယ် …
“ ဒကာမရဲ့ ယောက်ကျားက ဘယ်အချိန်တွေမှာ အရိုက်များတတ်သလဲ ”
“ ရိုက်တာတော့ အချိန်တိုင်းလိုလိုပါပဲ ဘုရား၊ သို့ပေမယ့် သူထမင်းစားခါနီးရင် ပိုပြီး ရိုက်တတ်ပါတယ် ဘုရား ”
ဒါနဲ့ပဲ ဆရာတော်ကြီးက အနီးအနားမှာ ရှိနေတဲ့ အုန်းလက်အရိုးတွေကို စုစည်းပြီး လုပ်ထားတဲ့ အုန်းတံမြက်စည်းကို ပေးပြီး…
“ ရော့ … နင့်ယောက်ကျား ထမင်းစားဖို့ စားပွဲနားမှာ ထိုင်တာနဲ့ အဲဒီတံမြက်စည်းကို အနားမှာသာ ချထားပေးလိုက် ” ဒီလိုပဲ မိန့်ပြီး ဆရာတော်ကြီးက ကျက်သရေခန်းထဲကို ကြွဝင်သွားပါတော့တယ် ။
အမျိုးသမီး ခမျာလည်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မသိ နားမလည် သော်လည်း “ အကြောင်းတော့ ရှိမှာပဲ ” ဆိုပြီး တံမြက်စည်းလေး ပိုက်လို့ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဆရာတော်ကြီး မိန့်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း သူ့ယောက်ျား ထမင်း စားခါနီးလို့ အပြစ် တစ်ခုခု ရှာတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ အမျိုးသမီးက တံမြက်စည်းလေးကို မသိမသာ အနားကို တိုးပေးထား လိုက်တယ် ၊ အမျိုးသားကလည်း အနားမှာ အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့ တံမြက်စည်းနဲ့ ကောက်ရိုက်တော့တာပါပဲ ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်လလောက် ကြာလာတဲ့ အခါမှာ … အမျိုးသားရဲ့ရိုက်ပုတ် နှိပ်စက်မှုတွေက တဖြည်းဖြည်း နည်းနည်းသွားပြီး နောက်ဆုံး လုံးဝ မရိုက်တော့ပါဘူး ။
အမျိုးသမီးက စမ်းသပ်ကြည့် ပါတယ် … ထမင်းကို စားလို့ လုံးဝ မကောင်းအောင် ပျော့အောင် ချက်ကြည့်တယ်၊ မနက်ကတည်းက ချက်ထားတဲ့ ထမင်းအေးကြီး ချကျွေးကြည့်တယ် ၊ ဘယ်လိုပဲ စမ်းစမ်း မရိုက်တော့ပါဘူး…။
ဒါနဲ့ပဲ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီးက သူ့အမျိုးသား ကိုပါ ခေါ်ပြီး ကျေးဇူးရှင် ရွာဦးကျောင်း ဆရာတော်ကြီးထံ အကြောင်းစုံ သွားပြီးလျှောက်ထားတဲ့ အခါမှာတော့ … ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ပါတယ် … “ အဲဒါ ဝဋ်ကြွေးကျေအောင် လုပ်ပေးလိုက်တာ ”…တဲ့ ။
ဆရာတော်ကြီး ဆက်ပြီး မိန့်တာက … “ တို့ဘုရားရှင် လက်ထက်တော် တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ဒကာတို့ ၊ ဒကာမတို့ … အတိတ်ဘဝက နွားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လင်ယောက်ကျားနဲ့ နွားရှင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ အကြင်လင်မယားဖြစ် ပြန်လည် ဆုံကြတဲ့ အခါမှာ … အတိတ်က နွားရှင်ဖြစ်ခဲ့စဉ်က နေ့စဉ် ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကို နွားဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားက နေ့တိုင်း ရိုက်နှက်နေတာမို့ ဘုရားရှင်က ခု ဘုန်းကြီးပေးတဲ့ နည်းလေး ညွှန်ကြားပေးတော် မူခဲ့တယ် …
တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ တစ်ချက်ခြင်း ရိုက်နေတော့ ဝဋ်ကြွေးက တော်တော်နဲ့ မကျေဘူးပေါ့၊ . အုန်းလက်ရိုး တံမြက်စည်းက တစ်ချောင်းကို အုန်းလက်ပေါင်း ရာချီပြီး စုစည်းထားတာမို့ တစ်ချက်ရိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး အချက် ငါးဆယ်လောက် ကြေပါတယ် … ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးလည်း ဒကာမက လာပြီးလျှေ ာက်ထားတော့ ဘုရားပေးတဲ့ နည်းလေး အတိုင်းပဲ ပေးလိုက်တာပါ…
“ ကဲ…ခုတော့ ဝဋ်ကြွေးတွေလည်း ကျေသွားကြပြီမို့ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင် နေကြပေရော့ ” ဒီလောက်ပဲ မိန့်ပြီး ဆရာတော်ကြီးက ကျက်သရေခန်းထဲ ကြွဝင်သွားပါတော့တယ် … ။
ကဲ … စာဖတ်ပရိသတ်လည်းပဲ … ဒီနည်းလေးကို နည်းယူပြီး သုံးကြမယ်ဆိုရင်တော့ …
* တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်မှာ အပြစ်မရှိပဲ အပြစ်တင်ခံရတဲ့ အခါ … အပြစ်ပြန်ပြီး မတင်ပါနဲ့ … ဝဋ်ကြွေး မကျေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်… များများလေးသာ တင်ပါစေ… ဒါမှ ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန် ကျေလိမ့်မယ် ။
* ကိုယ်တန်ဖိုးအထားဆုံး ကိုယ့်သိက္ခာတရားကို ရစရာ မရှိအောင် နှိမ်ချတဲ့ စကားတွေ အပြောခံရတဲ့ အခါလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ် … ပြန်မပြောပါနဲ့ … ဝဋ်ကြွေး မကျေပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် … များများလေးသာ ပြောပါစေ … ဒါမှ ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန် ကျေပါလိမ့်မယ်…။
* ကိုယ်က ကျေးဇူးပြုဖူးသူက ကိုယ့်ကျေးဇူးကို အခါခါ စော်ကားတာ မျိုးလည်း ကြုံရပါလိမ့်မယ် … ကျေးဇူးရှိလို့ ကျေးစွတ်တယ်လို့ မပြောလိုက်ပါနဲ့ … ဝဋ်ကြွေး မကျေပဲ ရှိပါလိမ့်မယ် … များများလေးသာ စော်ကားပါစေ … ဒါမှ ဝဋ်ကြွေး မြန်မြန် ကျေပါလိမ့်မယ် …. ။